2012 Aprilia Shiver 750GT ABS Review : Motorcycle Extreme Review | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (34054)
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (10786)
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9343)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (7792)
Kawasaki ZXR 750 - မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, သတင်း & Advi ... (7165)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (7026)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5530)
KTM Duke 125/200 RaceDynamics PowerTRONIC afte ရ ... (5404)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (5128)
နေအိမ် → Aprilia → 2012 Aprilia Shiver 750GT ABS Review : Motorcycle Extreme Review
5 မေ 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် 2012 Aprilia Shiver 750GT ABS Review : Motorcycle Extreme Review
V ကို 90- ENGINE: PURE TECHNOLOGY
Ride-by-wire specialized advancement with3applying techniques (အားကစား, Traveling and Rain);
Upside-down derive with 43-mm stanchions and shell cast calliper installs providing standard designs.Its 120-mm journey allows the participant to easily deal with city streets and mountain tracks. The lower and higher guiding plate are created of made aluminum. The side absorber is pivoted straight onto the swingarm according to the cantilever structure and the spring preload and gas recovery can be adjusted; the back wheel journey is 130 မီလီမီတာ.
The Aprilia SHIVER GT 750 provides the newest state-of-the-art specialized advancement for its avoiding system: radial callipers;aremedy that increases the sportiness of the style. အဆိုပါ 320 mm front side disks are the same as those used on leading activities motorbikes. အဆိုပါ 240 mm back disc fixed with individual aide calliper gives adequate support to the top side avoiding mechanism.
Aprilia Tuono 1000 R Factory manual, ပြန်လည်သုံးသပ်
2008 Aprilia တုန်လှုပ် 750 Revie- Shiver 750 First Ride Test- ဓာတ်ပုံများ
Aprilia Motorcycles – အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်, စျေးနှုန်းများ, ရုပ်ပုံများ – စာမျက်နှာ 18 @ Top Speed
Aprilia တုန်လှုပ် 750 ကို ABS
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2011 Aprilia SV 450-Aprili
ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို Ducati Diavel Moto Guzzi 1000 Daytona Injection ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype Bajaj Discover Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် စက်ဘီး Kawasaki ER-6n Ducati Desmosedici GP11 Ducati 60 တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 စမတ် eScooter ဟွန်ဒါ DN-01 ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို Aprilia Mana 850 ဆူဇူကီး AN 650 သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဆူဇူကီး Colleda CO Brammo Enertia KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto